पतिलाई छोडेर एक्लै सन्तानलाई पाल्दै छन् यी ५ नायिका ! – Medianp
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: सोमबार, कार्तिक १९, २०७५११:५६0
बलिउडका कलाकारहरुको प्रेम सम्बन्ध र वैवाहरिक सम्बन्धका समाचारले संचार माध्यमहरुमा राम्रै ठाउँ पाउने गर्छन्। नयाँ प्रेमी जोडी होस्, अथवा सम्बन्ध टुटेको जुनै पनि समाचार संचार माध्यममा तरँगनै पैदा गर्ने गर्छ। विवाह पछि सम्बन्ध विच्छेद भएका केहि नायिकाहरु अहिले आफ्नो सन्तानलाई एक्लै पाली रहेका छन्। यस लेखमा केहि नायिकाहरुको बारेमा चर्चा गर्ने छौ। जसले पति बिना पनि एक्लै आफ्नो सन्तानलाई हुर्काइरहेका छन्।
८० को दशकमा बलिउडमा राम्रै नं बनाउन सफल यी नायिका सैफ अली खानसँग विवाह गरेकी थिइन्। यी दुईबाट दुई सन्तानको जन्म भएकी थिइन्। अहिले सम्बन्ध बिच्छेद पनि आफ्नो दुई सन्तानको एक्लै हेरचाह गरिरहेकी थिइन्।
तिहारमा लक्ष्मीको पूजा गर्दा कस्तो तस्बिरमा गर्ने कस्तोमा नगर्ने ? कुन शुभ कुन अशुभ। धन आर्जन भन्दा बढी नोक्सान होला